बैंकिङ खबर Archives ~ Page5of 181 ~ Banking Khabar
दोस्रो त्रैमासमा टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकको मुनाफा ११ करोड नाघ्यो
बैंकिङ खबर । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकको नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २२ दशमलव ८३ प्रतिशतले घटेको हो । गत आर्थिक …
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मुनाफा पौने दुई अर्ब
बैंकिङ खबर । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा एक अर्ब ७५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४६ दशमलव ६५ प्रतिशत कम नाफा कमाएको हो । …
नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकको नयाँ शाखा अमवामा
नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले सियारी गाउंपालिका–७ को अमवामा शाखा कार्यालय स्थापना गरी बैंकिङ कारोबार सुरु गरेको छ । बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बैंकको यो १२ औं शाखा हो । शाखाको सियारी गाउंपालीकाका अध्यक्ष अयोध्या थारुले एक समारोहका बिच उद्घाटन …
सिद्धार्थ फाउन्डेसनद्वारा नेपाल कुष्टरोग निवारण संघलाई आर्थिक सहयोग
सिद्धार्थ बैंकद्वारा प्रबद्र्धित सिद्धार्थ फाउन्डेसनले खोकना आरोग्य आश्रमका कुष्टरोगीहरुको प्रयोगार्थ तीनवटा पानी टंकी जडान गर्न रु. ६७,०००/– बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । उक्त सहयोग रकम एक समारोहका बीच २०७४/१०/१२ गते बैंकका नायव महाप्रबन्धक रामेश्वर प्रसाद बस्यालले नेपाल कुष्टरोग …
सानीभेरी गाउँपालिकामा सनराइज बैंकको शाखा
सनराइज बैंक लिमिटेडले प्रदेश नं ५, रुकुम जिल्लाको सानीभेरी गाउँपालिका वडा नं. ९ मा नयाँ शाखा स्थापना गरी आफ्नो बैंकिङ्ग सेवा शुरु गरेको छ । उक्त शाखा कार्यालयको समुद्घाटन् मिति २०७४/१०/१४ गते आइतबारका दिन बैंकका नायब महाप्रबन्धक अपछ कुमार यादब …
प्रोग्रेशिभ फाईनान्स पनि अब अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा
बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (NCHL-IPS)मा आवद्ध गराउँदै लाने क्रममा नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले प्रोग्रेशिभ फाईनान्स लिमिटेडसँग अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (NCHL-IPS) सेवा संचालन सम्बन्धि सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार फाईनान्स कम्पनीलाई उपलब्ध गराईंएको NCHL-IPS आइतबारबाट संचालनमा आएको छ …
जनता बैंकले कमायो २७ करोड मुनाफा
बैंकिङ खबर । जनता बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा २७ करोड १७ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा खुद ६८ दशमलव ४२ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । गत …
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकले छ महिनामा कमायो एक करोड मुनाफा
बैंकिङ खबर । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा एक करोड नौ लाख १२ हजार रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकको नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५ दशमलव २९ प्रतिशतले बढेको हो । …
दोस्रो त्रैमासमै अर्बपति क्लबमा एभरेष्ट बैंक
बैंकिङ खबर । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा एक अर्ब १४ करोड ८१ हजार रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७ दशमलव ३४ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । …
बैंक अफ काठमाण्डूले कमायो ५५ करोड मुनाफा
बैंकिङ खबर । बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले चालु आर्थिका वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ५५ करोड १५ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आठ दशमलव २९ प्रतिशत कम नाफा कमाएको हो । गत …